Eng Yariisow oo Kaaraan ka daahfuray olole dalxiis-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Eng Yariisow oo Kaaraan ka daahfuray olole dalxiis-Sawiro
Eng Yariisow oo Kaaraan ka daahfuray olole dalxiis-Sawiro
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa xeebta Keysaney ee degmada Kaaraan ku daah-furay Olalaha Dalxiiska Caasimadda.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir uu ka shaqeynayo dib u soo nooleynta dalxiiska, maadaama Caasimaddu ay caan ku ahayd goobo si weyn loogu soo dalxiis tagi jiray.
Sidoo kale, Guddoomiye Yarisow ayaa ka warbixiyey qorsheyaasha ku saabsan dib u soo celinta goobahii nasashada bulshada ee Gobolka Banaadir, isagoona tilmaamay muhiimadda ay u leeyihiin goobahaasi bilicda iyo isdhaxgalka bulshada.
“Dalxiisku waxa uu astaan u yahay nabadda iyo horumarka bulshada, waa farriin cad oo ku wajahan kooxaha doonaysa in ay niyad jabiyeen shacabkeenna, muuqaal khaldanna ay ka bixiyaan dalkeenna.”
Guddoomiye Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa ganacsatada ugu baaqay in ay kaalintooda ka qaataan dib u soo nooleynta dalxiiska Caasimadda iyo dadaallada kale ee kor loogu qaadayo bilicda iyo horumarka Gobolka.
Olalahan oo ay ka shaqeynayso Waaxda Dalxiiska iyo Maalgashiga Gobolka, ayaa inta uu socdo waxaa lagu qaban doonaa 17-ka degmo ee Gobolba Banaadir bandhiyo ku saabsan dhaqanka iyo dhiirri gelinta dalxiiska.